Codbixiyaasha dhallinyarada oo garaneynin qaabka ay u codeyn rabaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Folkpartistisk valstuga med slogan för att locka unga väljare 2010. Foto: Niklas Larsson / SCANPIX
Codbixiyaasha dhallinyarada oo garaneynin qaabka ay u codeyn rabaan
La daabacay fredag 28 februari 2014 kl 14.54
450 000 dhallinyaro ah ayaa Iswiidhen markoodii ugu horeysey sannadkan codkooda ka dhiiban doona doorashooyinka dalka ka dhacaya. Inkastoo aysan cadeyn sida ay u codeyn donaan, Madaama ay dhallinyarada ka isbabadel badan yahiin marka loo barbar dhigo dadka da’da sare ah.
20-sanno jir Zenab Yousafzai oo ku nool magaalada Stockholm ma garaneyso xisbiga ay dooneyso in ay u codeyso doorashooyinka sannadkan dalka ka dhici doona, balse waxey ogtahay un in ay codkeeda dhiiban doonto.
- Waxaan rabaa in aan kaalin mugleh iyo saameyn mug leh ku yeesho, waayo bulshada ayaan qayb ka ahey waana muhiim in uu ruuxa ka qayb qaato doorashooyinka si uu u helo waxa uu doonayo, ayey tiri.
20-sanno jir Zenab Yousafzai ayaa kamid ah dad tiradooda gaareyso 442 346 oo sannadkan markii ugu horeysey fursad u helaya in ay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka dalka ka dhaci doona, sida doorashada loo galayo barlamaanka Midowga Yurub iyo kuwa loo galayo barlamaanka iyo golayaasha deegaanada dalkan. Zenab Yousafzai ayaan weli go’aansan xisbiga ay jeclan laheyd in ay u codeyso.
– Sidaas ugama aan fakerin, laakiin cida aan codkeyga siinayo waa in ay ahadaan kuwo wanaagsan oo ka soo baxa waxa ay balan qaadaan ayey tiri.
Markii ugu horey tan iyo sannadkii 2002 waxaa hoos u dhacdey tirada codbixiyaasha markii ugu horeysey fursad u helaya in ay codkooda dhiibtaan. Doorashooyinka sannadkan ayey dadka markii ugu horeysey codkooda dhiibanaya ay ka yahiin boqolkii lix dhamaan codbixiyaasha. Halka codbixiyaasha da’dood ka sareyso 65 ay tiradooda sii kordhayaan oo ay boqolkii 26 codbixiyaasha ayaga noqon doonaan. Laakiin dhallinyarada waxey dadka da’da ah kaga duwan yahiin in ayaga yahiin kuwo sida u codeynayaan aan la hubin.
Baaritankii ugu danbeeyey ee uu ka sameeyey xaafiiska dhaxe ee tirokoobka SCB codbixiyaasha, lana soo bandhigey bishii november, ayey ku jawaabeen saddex meelood meel codbixiyaasha ay da’dood ka hooseyso 25 sanno in aysan jirin xisbi ay taageeraan, halka marka loo barbardgiyo codbixiyaasha da’da sare ah ee xisbi joogto u taageera ay labo jibaar noqondeen. Henrik Ekengren waa barafesor culuumta siyaasada ka dhiga jamacadda Göteborg, waxuuna xeel dheere ku yahey dabeecadaha codbixiyaasha da’da yar.
– Isbabadelada taageerada ee dhallinyarada waa ka badan yahay marka loo barbardhigo dadka da’da sare ah oo badanaa taageradooda joogto tahay kuna tiirsan mabaadii iyo aydhiyoolajiyed xisbi ku tiirsan ayuu yeri.
22-sanno jir Rosanna Rutqvist ayaa kamid ah dhallinyarada aan go’aansan sida ay u codeyn doonaan sannadkan, waana markii labaad oo ay cod doorasho ka dhiibaneyso.
– Markii ugu horeysey ee doorasho ka qayb galey aragti sidaas u dorugsan kamo heysanin siyaasada. Sidaas daraaded waxaan sanduuqa ku ridey warqad cad. Laakiin hadda wax sidii hore dhaama ayaan ka garanayaa siyaasada waana garanaya dhanka aan rabo in aan u codeeyo.
Ka sakow in dhallinyarada aysan garaneynin cida ay taageersan yahiin, waxeys sidoo kale yahiin kuwo ka dhaga nugul marka loo barabrdhigo codbixiiyasha da’da sare ah. xisbiyada dhanka rayi aruurinta kaalinta sare ka gala ayaa badanaa ah kuwo soo jiita dhallinyarada markii ugu horeysey fursad u heleya in ay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka, sida uu qabo caalin Henrik Ekengren Oscarsson.
– Haddi xisbi dabeyl taageero ah gadaal ka riixeyso waxaa sidoo kale kordha taageerada codbixiyaasha markii ugu horeysey codkooda dhiban kara. Marka tusaale loo fiiriyo xisbiga Sverigedemokraterna waa mid sida weyn u soo jiidan doona codbixiyaasha markii ugu horeysey dhiiban doona codkooda, ayuu yeri caalin Henrik Ekengren Oscarsson.
Doorashooyinka dalka sannadkan ka dhaci doona xisbigee laga yabaa codkaaga in aad ugu rido?
Weli ma ogi
Ma doonayo in aan codeeyo